Banyere Anyị - Jiangyin Iverson Decoration Material Co., Ltd.
Ekele gị na IVERSON
Jiangyin Iverson Nchọpụta ihe Co., Ltd. e hiwere na 2005. Ọ bụ ụlọ ọrụ zuru oke na -ejikọ mmepe, imepụta na azụmaahịa.
Ngwakọta osisi plastik osisi (WPC), ihe mejupụtara plastik okwute (SPC), ala mpempe akwụkwọ PVC na ngwa ndị yiri ya wdg.
Enyi gburugburuy, ike na-adịghị amị amị, antibacterial na mildew-proof, waterproof na mmiri na-egosi, dị gịrịgịrị na ọkụ, na-eguzogide na-eyi, na-ada ụda ma na-ebelata mkpọtụ, onye na-egbochi ọkụ na ọkụ na-eguzogide, ma mara mma na ejiji.
A na -eji ngwaahịa anyị eme ihe n'ọtụtụ ebe ụlọ, ụlọ nkwari akụ，ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, nnukwu ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu, ama egwuregwu na ebe ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ anyị na -ekpuchi mpaghara nke 16, 000 square mita nwere ogbako ọgbara ọhụrụ na ụlọ nkwakọba ihe dị ọcha. Anyị nwere ahịrị mmepụta 4, yana ndị injinia ọkachamara, ndị ọrụ nwere nkà na ndị ahịa nwere ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ na laminate flooring. Ike mmepụta kwa afọ bụ5, 000,000 square mita dabere na igwe mepụtara na teknụzụ.
Tenet ụlọ ọrụ
"Dị Oké njọ, Na -akwụwa aka ọtọ, Gburugburu Ebe Obibil Nchedo, Innovation na -aga n'ihu "bụ mgbe niile echiche nke ụlọ ọrụ anyị.
Anyị na -esi ọnwụ otu ndị nrụpụta ọkachamara, akụrụngwa dị elu, akụrụngwa dị elu, usoro sayensị, njikwa njikwa siri ike yana atụmatụ ahịa zuru oke.
Ruo ọtụtụ afọ, ndị ahịa enwewo ntụkwasị obi dị ukwuu na ụlọ ọrụ anyị n'ihi ịdị mma anyị ama ama, ezigbo ọrụ na nnọgidesi ike n'ịzụ ahịa dịka nkwekọrịta na iwu ndị dị mkpa si dị.
Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị nwere mmụọ otu dị mma, nkwukọrịta na nka ịhazi, na -arụsi ọrụ ike ma nwee ike iguzogide nrụgide ọrụ. Anyị bụ nwata, na -anụ ọkụ n'obi, na -ekpori ndụ, nwere ahụmịhe, ma na -enye aka. Mgbe gị na anyị na -azụ ahịa, ọ nweghị ihe ị na -agaghị enwe obi ike.
Nzube anyị na -enye ndị ahịa anyị ụwa mma na ọrụ dị mma. Anyị na -atụ anya ka anyị na ndị ahịa niile nọ n'ụlọ ma ọ bụ ná mba ọzọ nwee nnukwu mmekọrịta azụmaahịa iji zụlite ahịa na ime ọdịnihu dị mma. Iverson na -ebute ndị ahịa ụzọ mgbe niile ma bụrụkwa onye mmekọ gị nwere ike ịtụkwasị obi.